Cali Ameeriko: Dowladda Kenya si qaldan ayey u fahantay hadalkii Fowziyo Yuusuf
Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Ambassador Maxamed Nuur Cali Ameeriga oo la hadlay Wargeyska The Daily Nation ayaa waxa uu sharaxay waxa uu macno ahaan u dhacayo hadalkii Wasiirada Arrimaha Dibadda Soomaaliya ay ka jeediyay golaha Amaanka Q/M, kaasi oo ay uga soo horjeesatay in Ciidamo Badeed oo AMISOM hoostaga la sameeyo.
Ambassador Cali Ameeriko ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ujeedka ay isku hortaagtay in la sameeyo Ciidamo Bad oo AMISOM ah ay tahay in dhaqaalo badan uu ka baxo taa badalkeedana loo baahanyahay in wax u dhigma kana manaafacaad fiican lagu sameeyo taasi oo ah in la dhiso Ciidamada Ilaalada Xeebaha Soomaaliya.
“Waxaan doorbideynaa in nagala caawiyo dhismaha Ciidamadeena Ilaalada Xeebaha, kuwaasi oo ka qiimo yar kana faa’iido badan waqti dheerna anfacaya Amaanka Soomaaliya iyo kan gobolka.” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Nuur Cali Ameerika.
Maxamed Nuur Cali Ameeriko ayaa carabka ku adkeeyay in Kenya ay si qalad ah u fahantay hadalkii Ra’iisul wasaare Kuxigeen ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ay ka jeedisay golaha Amaanka , waxaana uu xusay in hadalkaasi macnihiisa uusan u dhaceyn in Soomaaliya ay ka soo horjeesatay taageero nuuc kasta ah oo ay Kenya siiso.
“Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya kama soo horjeedo taageera kasta oo ay siinayaan Ciidamada Badda Kenya, dowladda Kenya iyada ayaa xaq u leh in ay go’aan sato Nuuca taageero oo ay dooneyso in ay ku caawinayso Soomaaliya.” Sidaasi waxaa Markale sheegay Cali Ameriko.
Kenya ayaa ah dowladda Kaliya ee qeybta ka ah howlgaka AMISOM ee ciidamo badeed ay ka joogaan Xeebaha Soomaaliya waxaana ay u ololeyneysay in Golaha Amaanka laga meel mariyo qaraar Ciidamo badeed oo AMISOM ah lagu sameeynayo kuwaasi oo ay ku kucidoonto qarashaad gaaraya 10-Milyan oo Doolarka Maraykanka.